Nebi Maxamed c.s - Wikipedia
Hogaamiyaha siyaasadeed ee Carabta iyo aasaasaha Islaamka
(Waxaa laga soo toosiyay Nabi Muxamed S.C.W.)
Waxa uu Rasuulka
dhashay sanadkii Maroodiga (Caamul-fiil), maalin Isniin ah oo bisha Rabbiicul-awal ahayd laba iyo toban, 53 sano hijrada ka hor. Markuu dhashay waxay hooyadiis u cid dirtay awaawgiis Cabdimudhalib oo ay ugu bishaareyneysey dhalashada Nabiga
, Cabdimudhalib waa uu bishaareystey wuxuuna tegey Kacbada oo uu Alle ku baryey wuuna ku shukriyey. Rasuulka
wuxuu u dooray magaca Maxammed oo ahaa magaca aan carabtu la bixi jirin, wuxuu guday maalinkii toddobaad. Waxaa kale oo la yiraahdaa wuxuu dhashay asaga oo gudan.
nuujisey dhowr maalmood Suweyda oo ahayd jaariyaddii Abii-lahab markaas ka horna adeerkiis Xamsa nuujisey hase yeeshee intii badnayd waxaa Rasuulka
nuujisey Xaliima binti abi-du'ayd (Xaliimatul sacdiay) oo uu qabay Xaarith binu Cabdul-cusaa oo kunyadiisa la odhan jirey Abi-kabshe, kunyadaas oo mararka qaarkood ay Qurayshi Rasuulka ku magacaabi jireen ayna dhihi jireen ina Abi-Kabshah. Habka ay ku nuujisey Xaliimo, waxaa jirtey caado ay carabtu lahaayeeen oo ahayd iney dumarku ka imaan jireen baadiyaha oo ay soo aadi jireen magaalooyinka si ay uga qaataan carruur ay nuujiyaan oo ay ujro (xoolo ama lacag) ku helaan, Xaliimo waxay tidhi: "Annagoo dumar badan ah ayaa magaalada Makka soo aadnay si aan carruur uga qaadanno, markaasaa loo bandhigay dumarkii oo dhan iney qaadaan wiilkan agoonka ah hase yeeshee dhammaantood wey diideen waxayna dheheen: "Maxaa ku samayneynaa inanka agoonka ah".
wuxuu ku dhashay magaalada Makka ee gobolka Xijaas deegaanada Carabiya, wuxuuna magaaladaasi ku noolaa 52kii sano ee ugu horeeysay noloshiisa (570kii ilaa 622 kalandarka Miilaadiga). Wakhtigaasi guud ahaan waxaa loo kala saaraa labo qeeybood oo kala ah nebinimada iyo risaalada ka hor iyo ka dib.
Quraan Quraanka Kariimka (carabi: ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ; ingiriis: Koran) waa kitaabka Alle ﺍﻟﻠﻪ (s.w.t) ku soo dejiyay Nebi Maxamed
(n.n.k.h), kaas oo ku qoran luuqada carabiga. Kitaabka Quraanka wuxuu saldhig u yahay diinta Islamka dhamaanteed.
Quraanka kariimka ah waa hadalka Ilaahay (ﺍﻟﻠﻪ) kaas oo malaga Jibriil u soo gudbin jirey Nebi Muxamed
(n.n.k.h) wakhti 23 sano ah, oo ku bilaabmaysa Diisembar 22keedii sanadkii 609 C.D (Ciise Dabadii), wakhtigaas oo nebigu ahaa 40 jir, ilaa markii taariikdhu ahayd 632 Ciise Dabadii, oo ku beegan sanadkii Nabi Maxamed
(n.n.k.h) geeriyooday. Sidaa diinta Islaamku sheegtay kitaabka Quraanku waa midka ugu sareeya kitaabyada ee Ilaahay ka ilaalinayo khaladka iyo musuqmaasuqa isla markaana hogaan iyo hanuunin u ah dhamaan aadamaha ku nool dunida.
Kitaabka Quraanka waxaa loo kala saaraa, guud ahaan, labo qeybood oo kala ah Makki (oo ah Quraanka ku soo dagay Nebiga
intii uu magaalada Makkah joogay) iyo Madani (oo ah Quraanka ku soo dagay Nebi Muxamed
wakhtigii uu magaalada Madiina deganaa). Intaasi kuma eeka qeybaha Quraanku ee waxaa kitaabku u sameeysan yahay nidaam loo yaqaano suurado, kuwaasi oo loo sii kala saaro aayado. Quraanku wuxuu ka kooban yahay boqol toban iyo afar Suuradood kuwaasi ooy ugu horeeyso suurada Al Faatixa (mahnaheedu tahay fur-furitaan ama "bilaabid") oo ka samaysan 7 aayadood ilaa laga gaadho suurada 114 ee Al-Naas (macnaheedu yahay dadka) oo ka kooban 6 aayadood.
Kitaabka Quraanka kariimka ah ee Ilaahay (s.w.t) ku soo dejiyay Nebi Muxamed
(n.n.k.h) waxaa lagu magacaabaa Al-Furqaan, kaasi oo ah tilmaamid ("al-huda"), xikmad, xasuusinta Alle ("al-dikhri"), iyo mid samada sare laga soo diray ("tanziil"). 
Dagaalkii Beder (ingiriis: the Battle of Bedr; carabi: ﻏﺰﻭﺓ ﺑﺪﺭ; "Ġazwat ‘Bedr") waa dagaal dhacay Sabti, Maarso 13keedii, sanadkii 624 C.D (C.D = Ciise Dabadii) oo u dhiganta 17kii Ramadan sanadkii 2aad ee Hijrada Islaamka; dagaalkaasi oo ka dhacay meelo ka mid ah deegaanka Xijaas (ee maanta ah dalka
Sacuudi Carabiya). Dagaalku wuxuu ka dhex dhacay ciidamo Islaamiyiin ah ka yimid magaalada xarunta u ahayd Islaamka wakhtigaasi ee Madina kuwaas oo uu hogaaminayay Nebi Muxamed (n.n.k.h) iyo xooga ciidan ka soo duulay magaalada Makka oo uu hogaaminayay madaxdii Qureysheed ee ka soo horjeeday diinta Islaamka.
Ka dib markey dadka muslimiinta ahi ka soo qaxeen magaalada Makka ayagoo u hijroonaya magaalada Madiina ayaa in badan ka mid ah qabiilka Quraysh waxaa cadho-gelisay in Nebi Muxamed
iyo asxaabtiisa ay nabad ku degan yihiin magaalada Madiina isla markaana ay fidinayaan diinta Islaamka. Taasi waxay dhalisey in Qurayshi dhowr jeer ku soo duusho Nebi Muxamed
iyo intii raacsanayd, markii ugu horeeysay Dagaalkii Beder (sanadkii 624 C.D) ee gaaladii reer Makka aad ugu jabtey, ka dib mar labaad dagaalkii aargoosiga ahaa ee Uxud ee dhacay sanadkii 625 C.D kaasi ooy si daran ugu xasuuqeen muslimiinta.
Si kastaba ha ahaatee, markey taariikhdu ahay Abriil sanadkii 626 C.D ayaa Nebi Muxamed
isku keenay ciidan ka kooban 300 oo nin iyo 10 faras si uu ula kulmo ciidamada Quraysh oo ahaa 1,000 nin. Waxay ku kulmeen deegaanka Bader taasi oo ah markii labaad eey ku kulmaan meeshani ka dib Dagaalkii Beder. In kastoo aanu wax dagaal ahi dhex marin labada dhinac, tani waxaa loo yaqaanaa Badertii Labaad. Wakhtigani labada dhinac waxay isla af-garteen heshiis ah inaan la dagaalamin intii mudo ah oo amaan lagu wada joogo. Mudo ka dib, qabiil Yuhuud ah ayaa u safrey magaalda Makkah si ay heshiis ula soo galaan qabiilka Quraysh, taasi oo markii dambe ay isla af-garteen in ay baabi'iyaan Nebi Muxamed
iyo inta raacsan oo dhan. Sidaasi ayaa duulaanka ay ku soo qaadeen isbaaheysigu; kaasi oo ah Dagaalkii Dhufeysyada ee muslimiinta reer Madiina ku sameeysteen dhufaysyo ay ku soo wareejiyeen magaaladaasi.
Difaacayaashii Islaamka reer Madiina oo uu hogaaminayay Nebi Muxamed
, waxay ahaayeen kuwo laga tiro iyo tayo badan yahay, sidaasi darteed waxay go'aansadeen ineey qodaan dhufeys dheer oo ku wareegsan magaalada ayagoo ka faa'iideysanaya deyrkii iyo gidaarkii ku wareegsanaa magaalada Madiina.
Xirfada ay isticmaaleen ciidamo Islaamiyiinta ahi waxay bedbaadisay in isbaaheysiga soo duulay ay qabsadaan isla markaana soo galaan magaalada xarunta u ahayd Islaamka wakhtigaasi ee Madina. Sidoo kale, fikradii ahayd in lagu baabi'iyo diinta Islaamka ee uu hogaaminayay Nebi Muxamed
(n.n.k.h) way fashilantey, in badan oo gaalada ahna waa la diley. Si kastaba ha ahaatee, guusha dagaalkani wuxuu horseeday in muslimiintu helaan dhiiranaan iyo kalsooni aad u balaadhan isla markaana wakhti yar ka dib qabsadaan deegaano badan iyo magaalada Makka laf ahaanteed.
Sida ku cad kitaabka Quraanka kariimka ah ee Alle u soo waxyooday Nebi Muxamed
waxaa jira tiro badan oo nabiyo iyo rasuul ah oo Ilaahay (koreeye) ku soo dejiyay kutub. Kuwaasi waxaa ugu horeeyay Nabi Ibraahim oo Alle u soo diray qoraalada Suxufi Ibraahim, waxaana ugu dambeeyay kitaabka Al-Furqaan ee Alle u soo waxyooday Nebi Muxamed
. Intaasi marka laga yimaado waxaa jira tiro kale oo nebiyo iyo rasuul ah oo Rabbi u soo diray kutub, laakiin inagu aqoon uma lihin kuwaasi, waxaana tusaale inoo ah: Nebi Ismaaciil, Nebi Yacquub iyo Nebi Yoonis oo dhamaantood leh kutub aynaan cilmi u lahayn.
ﻧﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ Kitaabka Quraanka
↑ "Naxariis iyo Nabadgelyo Korkiisa Ha Ahaato
(ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ, "ʿalayhi as-salām")"
↑ Esposito, John L. (ed.). p. 198. ISBN 978-0195125580 http://books.google.com/?id=E324pQEEQQcC&pg=PA198&dq=muhammad+birthday+Rabi%27+al-awwal#v=onepage&q=muhammad%20birthday%20Rabi%27%20al-awwal&f=false. Soo qaatay 19 June 2012. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ Meri, Josef W., 1, Routledge, p. 525, ISBN 978-0-415-96690-0 http://books.google.com/books?id=H-k9oc9xsuAC, soo qaatay 3 January 2013 Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ "waa kitaabka Alle ﺍﻟﻠﻪ (s.w.t) ku soo dejiyay Nebi Maxamed
↑ "hadalka Ilaahay (ﺍﻟﻠﻪ) kaas oo malaga Jibriil u soo gudbin jirey Nebi Muxamed
↑ 55.0 55.1 55.2 Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Asad-Surah-Intro
↑ . Books.google.ca http://books.google.ca/books?id=EmN8tCx_jR4C&pg=PA10&dq=first+Umayyad+Caliph&hl=en&sa=X&ei=ekTzUJO1M8G9rQGyuICADg&redir_esc=y#v=onepage&q=first%20Umayyad%20Caliph&f=false. Soo qaatay 2013-04-30. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ The Umayyad Dynasty Archived Juun 20, 2013 // Wayback Machine at the University 0f Calgary
, waxay ahaayeen kuwo laga tiro iyo tayo badan yahay"
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Nebi_Maxamed_c.s&oldid=220580"
Last edited on 20 Oktoobar 2021, at 18:51
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 20 Oktoobar 2021, marka ee eheed 18:51.